Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseFrance I-Paul Pogba Ingane Yendaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts
I-Paul Pogba Biography yethu iveze ngokuphelele izindaba Zobuntwaneni bakhe, Ukuphila Kwasekuqaleni, Abazali, Amaqiniso Omndeni, Umfazi, Izingane, Impilo Yomuntu Nempilo Yakhe. Ngamagama alula, sikunikeza ngokuhlaziywa okugcwele Komlando Wempilo Yakhe, kusukela ezinsukwini zokuqala zikaPogba kuze kube lapho abadumile.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngekhanda lakhe elimangalisayo namakhono anamandla amakhulu kodwa abambalwa abheka i-Bio yaPaul Pogba okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Indaba Yobuntwana KaPaul Pogba:
Paul Labile Pogba wazalwa ngo-15th ka-Mashi 1993 I-Lagny-Sur-Marne, eFrance. Wazalwa nomama wakhe waseCongo, u-Yeo Moriba kanye nobaba wakhe waseGuinea, uFassou Antoine bobabili abafudukela eFrance beyofuna amadlelo amahle ngesikhathi sokuqala kwe-1990s.
U-Pogba wanikezwa izinyanga ezintathu ngemuva kokuba abazali bakhe bathuthele eFrance, intuthuko eqinisekisa ukuhlala kwabo njalo ezweni. Ngaphambi kokuzalwa kukaPaul Pogba, unina kaJoo (umama kaPogba) wayephethe amawele okuthiwa uFlorentin noMathaas (abafowabo abadala bakaPaul Pogba) abahlala I-Conakry, eGuinea (izwe lakubo e-Afrika) ngemva kokufuduka kwabazali babo eFrance ngaphambi kokujoyina umndeni eFrance eminyakeni edlule.
Amaqiniso omndeni kaPaul Pogba:
UPaul Pogba uvela endlini ka 'Testosterone', indlu elawulwa yindoda. UFassou Antonie Pogba (ubaba kaPaul Pogba) uyindoda ethandekayo futhi enokuthula. Akazibandakanyi okuningi ebhizinisini lendodana yakhe (Ibhola) kanti uPaul Pogba uneminyaka engaphezu kweminyaka eyiphumelele ukudala ubuhlobo obuseduze naye. Noma kunjalo, u-Pogba wabelane ngesibopho esinamandla nonina.
Mayelana Nomama kaPaul Pogba:
Unina kaPaul Pogba (Yeo Moriba Pogba) ubuchopho bebhizinisi ngemuva kwebhola lebhola elidla kakhulu kunazo zonke emhlabeni. Lezi 'supermum' eziziqhenyayo (ezifanekiselwe ngezansi) zasiza ekukhuliseni abafana bakhe abathathu abakhulile baba abadlali bebhola abaqeqeshiwe.
Ubuhlobo bakhe nendodana yakhe yokugcina 'uPaul Pogba' luye lwaba khona ngokukhethekile kusukela ekuqaleni. Uqiniseke ukuthi wayejabulela izinzuzo zokuba ingane yakhe yokugcina kanye nokuthandaza nokumbumbuluza. Ngamafuphi, wamphatha ngokuhlukile kwamanye amadodana akhe.
Mayelana nabaFowethu bakaPaul Pogba:
Abathandi bezinyawo abadalaMathias futhi Florentin) bebelokhu 'benomhlane wakhe'. baphinde baqinisekise ukuthi umfowenu (ngaleso sikhathi) uthatha isiteji esiphakathi kwezenzakalo njengoba kubonakala esithombeni ngezansi.
Umlando kaPaul Pogba- Iminyaka Yokuqala nebhola:
UPaul Pogba waqala umsebenzi wakhe wezemidlalo eneminyaka eyisithupha ubudala edlala i-US Roissy-en-Brie, iqembu lebhola lezinyawo elalingamakhilomitha ambalwa eningizimu yedolobha lakubo.
Wasebenzisa izinkathi eziyisikhombisa eqenjini ngaphambi kokujoyina i-US Torcy, lapho ekhonza khona njengengumphathi weqembu eliphansi le-13.
Akubanga isikhathi eside ngaphambi kokuthi ajoyine iLe Havre academy njengomuntu oneminyaka engu-13 ubudala futhi wakhombisa ukwenza okuhle okwakhanga amakilabhu aphezulu ase-Europe njengoba eqhubekela phambili ngeminyaka yobudala.
Indaba kaPaul Pogba's Biography- Indlela eya Udumo
Ngesikhathi uPogba ememezela ukuthi ujoyina i-United ngo-2009, uLe Havre wakhungatheka wasola abakwaRed Devils ngokunikela "Kakhulu kakhulu" izibalo zemali - nendlu - kubazali bakaPogba ukuqeda isivumelwano esivele sikhona kakhulu.
ILe Havre ibona ukuthuthukiswa okungenakuqhathaniswa nokungahloniphi kweqembu leqembu eliyinhloko ngokudedela isitatimende ukuveza izikhalo zabo.
"Ngesikhathi amaqembu amaningi ekhuluma ngokumelene 'nokuhweba kwabantwana,' uManchester United akanqikazi ukususa izinyane le-16 eneminyaka engu-20 ubudala."
Kodwa-ke, uManchester United ususwe noma yikuphi ukungahambi kahle kweFIFA neLe Havre bakhetha ukungahambi kodwa badla izinyathelo zokudibanisa ngokufinyelela isivumelwano namaRed Devils.
UPaul Pogba wasebenzisa iminyaka engu-2 yokugcina ebusheni bakhe noManchester United kusuka ku-2009 kuya ku-2011. Kwakuse-United ukuthi uPogba wahlangana futhi wenza Jesse Lingard umngane wakhe omkhulu. UJese (ovezwe ngezansi ngePogba) wayenomsebenzi wakhe osemusha ngeManchester United kusukela ngonyaka we-2000-2011.
Indaba kaPaul Pogba's Biography- Rise to Fame Story:
U-Pogba wachitha iminyaka emithathu e-United ngaphambi kokungabi nesikhathi sokudlala eshukumisela ukuthuthela kuJuventus, iqembu elisize lazuza iziqu ezine ezilandelanayo zeSerie A, kanye nezinombolo zeCoppa Italia neziqu ze-Supercoppa Italian.
Amaqhawe akhe avumele ukubuyela e-Manchester United ngemali yokurekhoda yamaqembu angu-£ 89.3 Million Pounds ku-2016. Eminyakeni emibili kamuva, waba yingxenye yamadoda e-23 Isiqhema saseFrance lowo owawuthola I-2018 World Cup eRussia. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
Indaba yothando kaPaul Pogba:
UPaul Pogba akayena owokuziqhenya ekuhlanganyeleni nabesifazane abahle, iqiniso elibonakalayo ekukhetheni kwakhe ukuba nenqola noma intombi enhle okuthiwa uMaria Salaues.
UMaria Salaues uyisibonelo sakhe esisekelwe eMiami, intuthuko eyenza kube nzima ngaye ukuvakashela inhliziyo yakhe eManchester. Nakuba ubuhlobo bukaPogba neBolivia eneminyaka eyi-23 bulokhu bugcinwe kuphrofayili ephansi, i-duo yenza izinkambo ezimbalwa ezibonisa izinga abaye bafinyelela kulo mdlalo wabo wothando.
Ukukhishwa komphakathi kokuqala kumgqa wesikhathi sokuphola kwakuku-2017 lapho beqala ukubonisana ndawonye. Ukusheshisa kukaJune 2018 uMaria Salaues kubonakala sengathi ugqoke lokho okubukeka njengendandatho yokuzibandakanya njengoba ehlala eceleni kukaMama kaPogba eMoscow eLuzhniki Stadium ngesikhathi umdlalo weqembu lomhlaba weFrance ulwa neDenmark.
UPaul Pogba Roots Womndeni- Igazi Lamandla:
Isiqu esiphezulu sikaPaul Pogba sisongela bonke abadlali beqembu eliphikisayo. Ukuzikhethela kwakhe ngokusho kwabacwaningi kunezimpande zokhokho ezilandelwa ezinkambisweni zabamnyama bezemidlalo ezifana ne-American Kobe Bryant ovela egazini lamandla. Ubuciko obunamandla obukhulu bukaPaul Pogba, obunamandla obukhulu, buye bamenza waphumelela phakathi kweontanga.
Ukuzibophezela kwakhe ekufezeni amandla akhe akuyazi ukuthi akukho mingcele futhi akuyona intuthuko yakamuva. Usebenzise i-physiotherapist yakhe kanye nomhlengikazi wezilwane kusukela ehamba eFrance eneminyaka engu-16. Umzimba wakhe we-physiotherapist kanye nomhlengikazi uqinisekisa ukuthi uthola ukunakekelwa okufanele emva kwemidlalo futhi ugcina imizila eqinile ezikhathini zonyaka.
Paul Pogba Life Life- Off-Pitch Imisebenzi:
UPaul Pogba wenza lokhu kuqeqeshwa okunzima ukuthuthukisa amandla akhe okudubula okude futhi amsize ekuthuthukiseni amakhono akhe okusebenzisa amakhono nokuphila. Ikhono lakhe lokubhuka liveza ukuthi ukulungele yini ukubhekana nanoma yikuphi ukwesaba endleleni yakhe.
"Noma ubani ozama ukungikhathaza angase angimangele"
Paul Pogba Ingane Yokuxoxa Plus Untold Biography Facts-I-Dance Moves
U-Pogba uhambele abalandeli ngezinyathelo eziningana zokudansa azisebenzisela imikhosi noma nini lapho ehlola. UPaul Pogba ubonakala ngezansi ukuqhuba ukuhamba komdanso omusha nomlingani wakhe Jesse Lingard.
Ingoma uDao idansa eyahlabelelwa nguYeye waba ngumculi waseNigeria owazalwa, Wizkid.
Ibali likaPaul Pogba's Biography- Indaba Yomsebenzi Wokunakekelwa Kwezwe
U-Pogba akazange aqhubekele eqenjini eliphezulu laseFrance ngaphandle. Uqale ukubonakala kwakhe uLes Bleus kusukela e-U16 kuze kufike eqenjini lika-U20 'Espoirs'.
Ihora lakhe elihle kunazo zonke lafika ku-2013 lapho ehola iFrance enkazimulweni e-U20 World Cup. Umdlali ophethe leli cala, uguqulele inhlawulo ekudutshulweni kokugcina ngokumelene ne-Uruguay futhi wabizwa ngokuthi ngumdlali we-tournament.
UPaul Pogba naye wanqoba umklomelo we-Addidas Golden Ball ngesikhathi sokugcina kweNdebe yoMhlaba yeFIFA U-20 phakathi kweFrance ne-Uruguay e-Ali Sami Yen Arena ngoJulayi 13, 2013, e-Istanbul, eTurkey.
Imisebenzi yebhola lezinyawo yabazakwabo bakaPaul Pogba:
Ubuwazi?… Abafowethu abadala benkazimulo yaseFrance Florentin Pogba futhi Mathias Pogba bobabili bebhola kanye namawele afanayo.
Abafowabo Abadala AbaPaul Paul Pogba - UFlorentin Pogba (Ngakwesobunxele) no Mathias Pogba (Ngesokudla)
Bobabili bazalwa eGuinea. UFlorentin Pogba (okufanekisiwe esho manje ngumphathi weGuinea) njengesikhathi sokubhala.
Mayelana Nabazali bakaPaul Pogba:
Njengoba kushiwo ngaphambili, uyise kaPogba unguGuinea ngenkathi unina engumthombo waseCongo. Bobabili banobungane obuhle nendodana yabo. Kodwa-ke, umama kaPaul Pogba ubelokhu ehamba nazo zonke izinyathelo zokuphumelela kwakhe. Ubaba uzizwa ekhululekile ngokugcina iphrofayili ephansi futhi engahlanganyeli emisebenzini yamadodana akhe.
Umama kaPaul Pogba noMama nobaba
Ngesinye isikhathi, iManchester United yanikezela i-£ 85,000 kwabazali bobabili abazali babo ukuze baoze indodana yabo (Paul Pogba) ukuba bahlale nabo ku-2009. Qagela?. Bobabili bamukela imali. Lokhu kwabona isipele sokuqala kwendodana yabo eManchester United.
I-Biograus kaPaul Pogba- Indlela Unina Athonya Ngayo Ukudluliselwa Kwakhe:
Uvame ukukhishwa ngokuthi 'I-Supermum ne-football business tycoon eyaphenduka indodana yakhe uPaul Pogba ibe yinzuzo yezigidigidi zama dollar ngesikhathi esithile.
UNksz Yeo Moriba uhlekwa inkulumo yokuba ngummeli wendodana yakhe, umphathi kanye nomeluleki. Udlala indima efanayo namanye amadodana akhe amabili (uFlorentin noMathaas) bobabili baseGuinea bezwe.
Wema lapho, naphezu kokucindezelwa kuka-Alex Ferguson, emncenga ukuba avumele indodana yakhe ukuba ihlale eqenjini. Lapho ebuzwa ngokuhlangana kwakhe noFerguson, u-Yeo Moriba uhleka ngesikhathi ekhumbula enye yezimoto zakhe eziningi ezesabekayo no-Ex-Man U obhekene necala lokubhekana nekusasa lendodana yakhe uPaul Pogba.
"Lapho uFerguson engena endlini yami ngiyaqiniseka ukuthi uyadumazeka. Ngangilokhu ngimtshela, indodana yami uPaul ngeke aphinde asayine. Ngenxa yalokhu, uFerguson wamcindezela, akazange amdlale, Umntanami uPaul wayeyedwa. Wabe esekhala ehhovisi likaFerguson ngendlela ayephatha ngayou-ed. UPoop Pogba wayecasule lokho UPaul Scholes ubuyele emuva emndenini wakhe wokuhlala umhlalaphansi ngoJanuwari 2012 ukuze athole indawo yaseMelika ephakathi. Kuphela i-18 ngaleso sikhathi kanye neqembu elilodwa kuphela elibambe iqhaza egameni lakhe ku-League Cup, uPogba wazizwa ukuthi kufanele anikezwe ithuba lakhe. Lokhu kwenziwa indodana yami inqume ukushiya iqembu ".
Naphezu kwazo zonke izinkinga zethu, isimangaliso sasilokhu senzeke. Indodana yami yaba yinto esheshayo e-Juventus. Namuhla uzodingeka uthi ngiyazi kancane ngebhola, ngingase ngibe ngumama ovamile kodwa akekho ongangikhohlisa kuleli bhizinisi, "
UNksz Yeo Moriba Pogba uphika ukuthi uyinhloko ebambe iqhaza njengomphathi wendodana yakhe. Ngokusho kwakhe;
"Ngiceliwe kuphela iseluleko, yilokho kuphela. UPawulu uyangihlonipha, ulalela konke engikutshelayo. "
I-Biografia kaPaul Pogba- Feud no-Alex Ferguson
Phakathi nezikhathi zakhe eziphazamisayo eManchester United, uPaul Pogba wayaziwa ngamazwi alamba;
'Ngiyathanda ukwenza i-DIE kunokungadlali ibhola'.
Akesabi. Ukhululeka lapho ehlushwa ithuba elifanelwe. Wayengomunye wabadlali abambalwa abesabayo ababenemibala yokuhamba ukuze baqeqeshe uSir Alex Ferguson ukuba athi;
'' Mnumzane, ngicabanga ukuthi nginakho ngokwanele, Ngidlale, futhi ngizokukhombisa uma ngilungile noma angiyikho ''.
Kule vidiyo ngezansi, uPaul Pogba usolwa ngoManchester United "Ukungabi nhlonipho", ethi uyenze ukuqeqeshwa yedwa ngesikhathi engqubuzana nenkontileka eya phambili ngaphambi kokuthuthela kuJuventus,indodakazi endala '.
I-Powerhouse yaseFrance ingumSulumane owenza ngokholo. Uvame ukubonwa ekhuluma emithandazweni emifushane ngaphambi kwemidlalo.
Naphezu kokuba ngumdlali webhola lezinyawo, uPaul Pogba unesiko esinamandla samaSulumane. Ulandela futhi ahloniphe isiko lama-Arab.
Isidlaliso sikaPaul Pogba- Kungani ethwala 'i-Octopus':
Kwabaningi abaye babheka iPogba yonke indlela, omunye ubengayibona eminye imilenze emide ehlanzekile nemilenze ehlanzekile eyasetshenziswa nanamuhla ekuhlaseleni nasekuvikeleni.
Izinyawo zakhe ze-6.3 ezinamahlombe nezinyawo ezithandekayo ziyakuthandwa ngabalandeli abaningi bebhola. Yingakho abalandeli ababi bamqamba ngokuthi ("UPaul the Octopus"). Leli gama lafika ngenxa yemilenze yakhe ende futhi eguquguqukayo. Abathandi bakholelwa ukuthi imilenze yakhe ifana ne-tentacles ye-an ingwane lapho ehlasela, egijimayo, ehamba futhi ehlaba izibhamu ezide.
Abafowabo abadala basePogba bafuna ukumbiza ngokuthi 'I-Pogboom'ngenxa yemizamo yakhe emide emgomweni. Lesi yisiteketiso esibhalwe ezikhunjini zakhe.
Umsuka weNickname kaPaul Pogba:
Igama elithi 'Paul the Octopus'ivela ku-Octopus ethandwayo eyayisetshenziselwa ukubikezela imidlalo ngesikhathi seNdebe Yomhlaba ye-2010. UPaul (Manje Late and Rumored to have been killed by Global Sports Betting Billionaire Owners) wabikezela ngempumelelo imidlalo yebhola lebhola lebhola lezwe. KuPaul, ukuthembela ebhokisini kusho ukuthi izwe lizowina umdlalo olandelayo.
I-Biography kaPaul Pogba- i-LifeBogger Rankings
Kuyafaneleka ukufakazela ukuthi umdlali onjengoPaul Pogba ubonisa iresiphi enkulu yebhola lezwe. akuyona nje izinwele zokugqoka kanye nesigqoko sokugqoka, kodwa isitayela sakhe sokudlala simenza abe ngumthandi wesizukulwane seFIFA-Vine. Thola ngezansi, isikhundla sikaPaul Pogba's lifebogger.
Siyabonga ngokufunda i-Paul Pogba Childhood Story kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.
Thomas Lemar Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka